ပရိုတွန်၊အီလက်ထရွန်တွေ နဲ့ နယူထရွန်တွေရဲ့  အရေ အတွက်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ? | MUCTR	RSS
ပရိုတွန်၊အီလက်ထရွန်တွေ နဲ့ နယူထရွန်တွေရဲ့  အရေ အတွက်ကို ဘယ်လိုရှာမလဲ?
sslpkkp On April - 21 - 2010	ဒီနေ့တော့ ခေါင်းစဉ်လေးအတိုင်းပါပဲ။ ပရိုတွန်၊ အီလက်ထရွန်တွေနဲ့ နယူထရွန်တွေ ရဲ့  အရေအတွက်ကို ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? တဲ့ ခုရေးမယ့်အကြောင်းမှာ ရှာတယ်ဆိုတာထက် ရှာဖွေဖို့ထက် အခြေခံသိရှိခြင်း ဖော်မြူလာလေးဆို ပိုမှန်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ အမှားပါတယ်ဆိုရင်တောင် ခွင့်လွတ်ကြပါ။ ကဲ … ထားပါတော့ ခု ဒီအကြောင်း How to find the number of protons, electrons and neutrons? ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ English လိုရေးသားထားသည်များကို သွားရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် ဦးစွာမဏာမတော့ မြန်မာမှု ပြု၍ ဘာသာ ပြန်ဆိုခြင်းကို အောက်မှာ အရင်ရေးသားတင်ပြပါရစေပေါ့ဗျာ …. ဖတ်ရှုအားပေးတော် မူကြပါအုံးနော်
•	ပရိုတွန်အရေအတွက်များ = အက်တမ်အမှတ်စဉ်
•	အီလက်ထရွန်အရေအတွက်များ = ပရိုတွန်အရေအတွက်များ = အက်တမ်အမှတ်စဉ်
•	နယူထရွန်အရေအတွက်များ = ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ် – အက်တမ်အမှတ်စဉ်
•	ဒြပ်ထုအမှတ်စဉ် = ပရိုတွန်များအရေအတွက် + နယူထရွန်များအရေအတွက်
Author = SSLPKKP
Enter Your Mail Address	Categories: Basic Chemistry LeaveaReply
Recent CommentsMuctr Students on Offline Periodic Table (မြန်မာဘာသာ) ထူးခြားချက် နှင့် အသုံးပြုပုံVen.Khe on Offline Periodic Table (မြန်မာဘာသာ) ထူးခြားချက် နှင့် အသုံးပြုပုံပြည့်ဖြိုးနိုင် on အက်တမ် သမိုင်းကြောင်းသားညီ on Dictionary and Translator Softwares Collectionsသားညီ on Dictionary and Translator Softwares CollectionsRandom PostsNuclear stability (နျူကလိယများ၏တည်မြဲနိုင်မှု) (0)Nucleus ထဲတွင် ပရိုတွန် နှင့် နူထရွန် ဟူသော အမူန်နှစ်မျိုး ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။၎င်း အမူန်နှစ်မျိုးကို nucleons ဟုခေါ်ပါသည်။ nucleusများ အဘယ့်ကြောင့် မတည်မြဲရသနည်း? အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် nucleus ထဲ၌ ဖွဲ့စည...အက်တမ်အလေးဆများ ပြင်ဆင်ခြင်း (0)ဆယ်စီယမ်(Cs)၏ အက်တမ်အလေးဆသည် ၁၂၃.၄ ဖြစ်ကြောင်း ယခင်က ဘွန်ဆင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြစ်လျှင် ဆယ်စီယမ်နှင့် ရူဘီဒီယမ်(Rb)တို့၏ အလေးဆချင်း ကွာခြားမှု(Cs-Rb) သည် ၃၇.၉၅ ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ပက်တင်ကော့ဖာ၏ လေ့လာမ...Shweyoe Dictionary Version 3.0 (ရွှေရိုးအဘိဓာန်) (0)ရွှေရိုး အဘိဓာန် (Shweyoe Dictionary for Windows) ကို Update ပြုလုပ်ထားသော Shweyoe Dictionary Version3ဖြစ်ပါတယ်။ Shweyoe Version3တွင် ဘာသာစကား ငါးမျိုးမှ မြန်မာဘာသာသို့ အပြန်အလှန် အလွယ်တကူ ဘာသာပြ...Dictionary and Translator Softwares Collections (2)အားလုံးအတွက် အသုံးဝင်သော အဘိဓာန်များနဲ့ ဘာသာပြန် ဆော့ဖ်ဝဲများအား ရယူအသုံးပြုနိုင်စေရန် စုစည်းတင်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ ဘာသာစကား၊ ဘာသာရပ်နှင့် နည်းပညာ စသည့်နယ်ပယ် အသီးသီးအတွက် လေ့လာသင်ကြား ဖတ်ရူ့ရေးသားရာတွင...Stable and Unstable Nucleile (0)ဟိုက်ဒြိုဂျင်အက်တမ် (1H1) မှအပ တစ်ခြားသော အက်တမ် အားလုံး၏ နျူးကလိရပ်စ်များတွင် တစ်လုံး သို့မဟုတ် တစ်လုံးထက်ပိုသော ပရိုတွန် နှင့် နျူထရွန် ပါဝင်ကြသည်။ ဥပမာ - 12C6 ၎င်း ကာဗွန် အက်တမ်သည် နျူထရွန် ခြောက်လံ...TagsDictionary